စာရင်းစစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာပြတင်းမှ အစိုးရကိုလှမ်းမျှော်ကြည့်ခြင်း – The Voice Journal
စာရင်းစစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာပြတင်းမှ အစိုးရကိုလှမ်းမျှော်ကြည့်ခြင်း
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာ ထွက်လာသည်။
စာရင်းစစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာဟူသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တိုင်းနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကိန်းဂဏန်းဖြင့် ထင်သာမြင်သာ အကဲဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အစိုးရ၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ ထိရောက်မှုနည်းသည်၊ ထိရောက်မှုမရှိ သို့မဟုတ် အောင်မြင်မှုရရှိသည်ဆိုသည်ကို စာရင်းစစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာက ယေဘုယျအားဖြင့် ဖော်ပြနိုင်သည်။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာရှိကိစ္စများကို အပိုင်းနှစ်ပိုင်း ခွဲခြား၍ရသည်။ ပထမတစ်ပိုင်းမှာ ယခင်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကာလ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်ဆွေလက်ထက်က လုပ်ခဲ့သောကိစ္စများ၊ အစိုးရအပြောင်းအလဲ ဖြစ်ခါနီးက လုပ်ခဲ့သောကိစ္စများနှင့် NLD အစိုးရလက်ထက်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းလက်ထက် စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သောကိစ္စများဖြစ်သည်။
ကန်တော်ကြီး သဘာဝဥယျာဉ်မြေ၊ ပြည်သူ့ဥယျာဉ်မြေ၊ ရှုခင်းသာအပန်းဖြေဥယျာဉ်၊ မြကျွန်းသာ အပန်းဖြေဥယျာဉ်တို့ရှိ မြေငှားရမ်းသည့်ကိစ္စများတွင် နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာ ကျပ်ဘီလီယံနှင့်ချီ၍ နစ်နာခဲ့မှုများသည် ယခင်အစိုးရလက်ထက်က လုပ်ခဲ့သော ကိစ္စများဖြစ်သည်။ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းလက်ထက်တွင် ငှားရမ်းခများ တိုးတောင်းခဲ့သော်လည်း ကာလပေါက်ဈေးနှင့်တွက်ပါက ယနေ့အထိ ကျပ်ဘီလီယံနှင့်ချီ နစ်နာဆဲဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် အစိုးရအကူးအပြောင်း စပ်ကူးမပ်ကူးကာလတွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ကိစ္စများလည်းရှိသေးသည်။ ယင်းမှာ ဒဂုံမြို့သစ် (အရှေ့ပိုင်း) ၊ မလစ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် မြေဧက ၅၅၀ ကို Excellent Fortune Construction ထံ ဂရန်ချပေးမှုနှင့် အဆိုပါနေရာတွင်ပင် မြေဧက ၄၀၀ ကို မြို့တော်သစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်ထံ ဂရန်ချပေးမှုများသည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်မညီကြောင်း စာရင်းစစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြခဲ့သည်။
“ဒါမျိုးဆို ဧက လေး၊ ငါးရာကို အစိုးရအကူးအပြောင်းမှာ ကမန်းကတန်း ချပေးခဲ့တယ်။ ချပေးတဲ့အပြင် တစ်စတုရန်းပေကို ကျပ် ၉၀၀ လောက်ပေါက်တာကို ၂၀ ကျပ်နဲ့ တွက်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါဆိုရင် နိုင်ငံတော်က နစ်နာတာပေါ့။ အစ်မတို့လွှတ်တော်က စစတက်ချင်း ၂၀၁၆ လောက်မှာ ဒီကိစ္စကို ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ ဖြစ်စေချင်တာက ကြားကာလမှာ ချပေးခဲ့တဲ့ လွန်လွန်ကျူးကျူးကိစ္စတွေကို အစိုးရအနေနဲ့ ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲပေါ့လေ” ဟု တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ကြည်ပြာ က The Voice Journal သို့ ပြောကြား သည်။
“ဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ မညီတာတွေ စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာမှာ အများကြီးပဲ။ မြေဂရန်တွေချပေးခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေကရော အဂတိနဲ့ အကျုံးမဝင်ဘူးလား။ ဒါမျိုးတွေ မစိစစ်သင့်ဘူးလား။ အရင်အစိုးရက လုပ်ခဲ့တာတွေနော်။ ဒီဘက်အစိုးရက ပြန်ကိုင်တွယ်ဖို့လိုတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ဤကဲ့သို့ နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာနစ်နာမှုများအတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဖြစ်ခဲ့သူ ဒေါက်တာ ညိုညိုသင်းကလည်း အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်တွင် အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ထံသို့ တိုင်ကြားခဲ့သည်။
စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာ၏ နောက်တစ်ပိုင်းမှာ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းလက်ထက် လုပ်ဆောင်ခဲ့သောကိစ္စများ ဖြစ်သည်။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်သည် ဆိုရလျှင် အစိုးရအဟောင်းမှ အစိုးရသစ်သို့ ပြောင်းခဲ့သည့် စပ်ကူးမပ်ကူးကာလ ဖြစ်သည်။ NLD အစိုးရ အတွက် အတွေ့ အကြုံသစ်ဖြင့် စတင်ရသည့်ကာလ ဖြစ်သည်။
ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းလက်ထက်တွင် စနစ်ကျလယ်ယာမြေ ဖော်ထုတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယင်းစီမံကိန်းဖော်ဆောင်ရာတွင် နောက်ကျသည့် ကုမ္ပဏီ များထံမှရရှိသည့် ဒဏ်ကြေးကို အသုံးစရိတ်အဖြစ် ပြန်လည်သုံးစွဲခဲ့သည်။ ယင်းဖြစ်ရပ်ကိုလည်း ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ဟု စာရင်းစစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ထို့ပြင် တိုင်းအစိုးရသည် ရန်ကုန်မြို့ပြ အများ ပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အများပိုင်ကုမ္ပဏီ (YUPT) တွင် ကျပ် ၃၅ ဘီလီယံ၊ ရန်ကုန်ဘတ်စ်ကားအများနှင့် သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက် (YBPC) တွင် ကျပ် ၃၅ ဘီလီယံ၊ Yangon Metropoliton Development Company (YMD) တွင် ကျပ် ၅၄ ဘီလီယံနှင့် Yangon Metropoliton Development Company (YMD) တွင် ကျပ် ၁၀ ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ အများပိုင်ကုမ္ပဏီလေးခုတွင် စုစုပေါင်း ကျပ် ၁၃၄ ဘီလီယံရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
တိုင်းအစိုးရသည် တရုတ်နိုင်ငံမှ ဘတ်စ်ကားများကို အစိုးရချင်းချိတ်ဆက်၍ တစ်စီးလျှင် ကျပ် ၇၇ သန်းနှုန်းဖြင့် အစီးရေ ၁၀၀၀ ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ထိုအတွက် ဧရာဝတီဘဏ်မှ ကျပ် ၈ ဘီလီယံချေးယူခဲ့သည်။ အဆိုပါချေးငွေအတွက် အစိုးရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့် YUPT နှင့် YBPC ကုမ္ပဏီများက ပြန်ဆပ်ကြရမည် ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင်လည်း ဝေဖန်မှုများသော ကိစ္စတစ်ခုမှာ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ကျောင်းကားအစီး ၂၀၀ ကို အစိုးရချင်းချိတ်ဆက်မှုဖြင့် တိုင်းအစိုးရက ဝယ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လိုအပ်သောငွေကို ကမ္ဘောဇဘဏ်ထံမှ ချေးငွေ ၅ ဒသမ ၅ ဘီလီယံချေးငွေရယူခဲ့သည်။ အဆိုပါငွေကို မည်သူချေးယူကြောင်း တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ဝင်းက ဆက်စပ်မေးခွန်းဖြင့် မေးမြန်းခဲ့ရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဒေါ်နီလာကျော်က အတိအကျပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ တိုင်းဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ခံထံ မေးမြန်းပြီးမှသာ ပြန်လည်ဖြေကြားမည်ဟု လွှတ်တော်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဧရာဝတီဘဏ်နှင့် ကမ္ဘောဇဘဏ်ရှိ ချေးငွေများအတွက် ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာဖြင့် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် သဘောမတူကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်စန္ဒာမင်းက လွှတ်တော်တွင် ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။
“ဧရာဝတီဘဏ်၊ ကမ္ဘောဇဘဏ်တို့မှ ချေးငွေရယူထားခြင်းကို လွှတ်တော်၏ ခွင့်ပြုချက်မပါရှိသောကြောင့် ဧရာဝတီဘဏ်သို့ ကျပ် ၈ ဘီလီယံ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်နှင့် ကမ္ဘောဇဘဏ်မှ ချေးငွေကျပ် သန်း ၅၅၀၀ အား ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်အတွက် အများပြည်သူဘဏ္ဍာငွေများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ခွင့်ပြုထားသော ခရီးသည်တင်ယာဉ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအများပိုင်ကုမ္ပဏီတွင် (လုံးဝ) တာဝန်မရှိပါကြောင်း” ဒေါ်စန္ဒာမင်းက အောက်တိုဘာလ ၂ ရက် လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ထို့ပြင် အဆိုပါချေးငွေများသည် “ဘဏ္ဍာရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို ကျော်လွန်၍ မိမိသဘောဖြင့် လူပုဂ္ဂိုလ်အရ ချေးထားသော ငွေများဖြစ်ပါကြောင်း၊ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် လွှတ်တော်မှ သဘောမတူပါကြောင်း” ဒေါ်စန္ဒာမင်းက လွှတ်တော်တွင် ဆိုသည်။
စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာပါတိုင်း အစိုးရ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ လွှတ်တော်နှင့် တိုင်းအစိုးရအကြား အမြင်မတူမှုများရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကမူ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ နစ်နာမှုများကို ကုစားနိုင်ရေး အစိုးရကို ထောက်ပြခဲ့ကြသည်။
“တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနှင့် နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအပေါ် ပြည်သူများ၏ ယုံကြည်အားထားမှုများ ပိုမိုတိုးပွားလာစေဖို့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ် စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာများထဲမှ နိုင်ငံတော်၏ နစ်နာမှုများအတွက် အပြစ်ရှိသူများကို တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူဆောင် ရွက်သင့်ပါကြောင်း အကြံပြုလိုက်ရပါတယ်” ဟု ပန်းဘဲတန်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းနိုင်ဦးကလည်း အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် တိုင်းလွှတ်တော်တွင် ၎င်း၏ သဘောထားကို ဖွင့်ဟဆွေးနွေးခဲ့သည်။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ် ဒေါ်ခင်သန်းလှ ဦးဆောင်၍ အဆင်ဆင့်သော စာရင်းစစ်ဝန်ထမ်း ၉၁၉ ဦးဖြင့် စစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအင်အားသည် ခွင့်ပြုအင်အားထက် ၅၀၉ ဦး လျော့နည်းစစ်ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး စာရင်းစစ်အင်အား အလုံအလောက်ရပါလျှင် ယခုထက်ပိုမိုတိကျသော အချက်အလက်များ ရလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စာရင်းစစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ထံသို့ ပေးပို့သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက်ပင် ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ထံသို့လည်း ပေးပို့သည်။ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅(ဃ) က ယင်းသို့ပြုလုပ်ရန် အတိအလင်း ဖော်ပြထားသည်။
စာရင်းစစ်ချုပ်များ၏ စစ်ဆေးချက် တွေ့ရှိချက်များသည် လွတ်လပ်၍ အမှီအခိုကင်းရန်အတွက် ဒီမိုကရေစီစနစ်တွင် လွတ်တော်သို့ တစ်ပါတည်း တင်ပြခိုင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အဖြစ် ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက စာရင်းစစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာပါ တွေ့ရှိချက်များအပေါ် ထောက်ပြဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အစိုးရကို ထိန်းကျောင်းနိုင်ခဲ့ကြသည်။
The Voice Journal ၏ လေ့လာမှုအရဆိုလျှင် နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာငွေသည် တစ်နှစ်လျှင် ကျပ် ၈၃ ဘီလီယံထက်မနည်း နစ်နာလျက်ရှိသည်။ ယင်းကို စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာက ဖော်ညွှန်းသော နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာနစ်နာမှုများ ဇယားတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဤနစ်နာမှုသည် သိသာထင်ရှားသော နစ်နာမှုများသာ ရှိသေးသည်။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ စာရင်းစစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာကို တိုင်းလွှတ်တော်တွင် အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်က အတည်ပြုခဲ့သည်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ထောက်ပြဝေဖန်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့၏ ဝန်ကြီးတစ်ပါးပါးကမှ ပြန်လည်မရှင်းလင်းခဲ့။ သို့သော်လည်း တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ် ဒေါ်ခင်သန်းလှ က ပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့ပြီး လွှတ်တော်တွင် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာမှာ တစ်ခန်းရပ်သွားပြီ ဖြစ်သော်လည်း ပြည်သူများကမူ ၎င်းတို့ တင်မြှောက်ထားသည့် အစိုးရကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေဆဲပင်။ 
စာရင်းစစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာပါ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာနစ်နာမှုအချို့
Prime Residence Co,Ltd ထံအငှားချ။
(၇.၁၀.၂၀၁၄) မှ (၇.၁၀.၂၀၆၄) အထိ စုစုပေါင်း နှစ် ၅၀
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် အပြီးသတ်ပြင်ဆင်ရန် စာချုပ်တွင်ဖော်ပြ
(ပြင်ဆင်သည့်ကာလကုန်ဆုံးသည်ဟု သတ်မှတ်သည့် (၇.၁၀. ၂၀၁၇) မှစ၍ ငှားရမ်းခ တစ်နှစ် ကျပ်သန်း ၄၀၀ ပေးရန်ဖြစ်သော်လည်း မပေးချေဟု စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာကဖော်ပြ)။
ယခုနှစ် (၇.၁၀.၂၀၁၈) ထိဆိုပါက သန်း ၈၀၀ နိုင်ငံတော်ကနစ်နာ။
အနော်မာအနုပညာအဖွဲ့ကုမ္ပဏီထံBOT စနစ်ဖြင့် အငှားချ။
ပြတိုက်အပါအဝင် အခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ် အသုံးပြုရန်။
(၂၉.၁.၂၀၁၅) တွင် စာချုပ်ချုပ်။
(၂၉.၁.၂၀၁၅) မှ (၂၉.၁.၂၀၆၅)အထိ နှစ် ၅၀။
ဝန်ကြီးများရုံးနှင့် ဝန်ကြီးများရုံးမြေ စုစုပေါင်း ၁၅ ဒသမ ၉၆၃ ဧကအတွက် တစ်နှစ် ကျပ်သန်း ၃၀၀ ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြု။ (တစ်နှစ်လျှင် တစ်ဧက ၁၈ ဒသမ ၇၉၃ သန်းကျသင့်)
စုပေါင်းရုံးအဆောက်အအုံ ငှားရမ်းခနှင့်ယှဉ်လျှင် တစ်နှစ်လျှင် ကျပ် ၁ ဒသမ ၈၀၉ ဘီလီယံခန့် နစ်နာဟု စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာကဆို။
အဆိုပါလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါအောင် Myanmar Shwe Ying International Co., Ltd. & China Railway 21st Bureau Cgroup Co.,Ltd. (China) က လုပ်ဆောင်။
ယင်းလုပ်ငန်းအတွက် အစိုးရက ၁၈ ဒသမ ၉၃၈ ဘီလီယံသုံးထား။
(၂.၈.၂၀၁၆) တွင် System လုပ်ငန်းများ အပြီးသတ်ဆောင်ရွက်ရန် မပြီးပါက တစ်ရက် ဒဏ်ကြေးတစ်သိန်းပေးရန် စာချုပ်ချုပ်ဆိုထား။
ယနေ့အထိ မပြီးသောကြောင့် ရက်ပေါင်း ၂၁၀ အတွက်သာ ဒဏ်ကြေး ၂၁ သန်းရရှိ။
(ဒဏ်ကြေး ဆက်လက်ပေးဆောင်ထားမှု မရှိခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းပြီးမှု မရှိကြောင်း စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြ)။
ဒဏ်ကြေးမဆောင်သည့်ကာလ ၁၇ လရှိသောကြောင့် ၅၁၅ သိန်း နိုင်ငံတော်က နစ်နာ။
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ဧက ၅၅၀
Excellent Fortune Construction Co., Ltd. ထံ လုပ်ကိုင် ခွင့်ပြု။
တည်နေရာမှာ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ မလစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်တလုတ်ကျေးရွာမြေဖြစ်သည်။
စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး ငါးရက်အကြာ၊ NLD အစိုးရမတက်မီ တစ်ရက်အလို (၃၀.၃.၂၀၁၆) တွင် ဂရန်ချထားပေးသည်။
၃၁.၃.၂၀၁၆ တွင် NLD အစိုးရတာဝန်ယူသည်။
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ဧက ၄၀၀
မြို့တော်သစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီလီမိတက်။
တည်နေရာမှာ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ မလစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်တလုတ်ကျေးရွာမြေ ဖြစ်သည်။
စာချုပ်မချုပ်မီ တစ်လအလို (၁၁.၁၁.၂၀၁၅) တွင် ဂရန်ချပေးထား။
(စာချုပ်မချုပ်မီကပင် မြေငှားဂရန်များထုတ်ပေးပြီး ဖြစ်သဖြင့် ကုမ္ပဏီများသို့ ဂရန်ထုတ်ပေးထားခဲ့ခြင်းဟု စာရင်းစစ်ချုပ်အစီခံစာ တွင် ဖော်ပြ)
တိုင်းဒေသကြီး စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး၊ သစ်တောနှင့် စွမ်းအင် ဝန်ကြီးက ဥက္ကဋ္ဌဦးဆောင်၍ စက်မှုလယ်ယာ၊ စနစ်ကျလယ်ယာမြေ ဖော်ထုတ်ရေးကော်မတီဖွဲ့ကာ လုပ်ကိုင်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှစ်မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ ၂၂ ခု ၊ လယ်ဧက ၄၀၁၅ ဒသမ ၆၁ တွင်လုပ်ကိုင်။
တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ကုမ္ပဏီ ၁၉ ခုကို ရွေးချယ်။
ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေ ၇၇၄၈ ဒသမ ၃၀၁ သန်း။
အချိန်မီမပြီးစီးသည့် ကုမ္ပဏီများထံမှရရှိသည့် ဒဏ်ကြေး ၁၂၀ ဒသမ ၁၂၅ သန်းကို အသုံးစရိတ်အဖြစ် ပြန်လည်သုံးစွဲသဖြင့် စုစုပေါင်း ၇၈၆၈ ဒသမ ၄၂၆ သန်း ကုန်ကျ။
(ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ဟု စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြ)။
ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း)၊ ဧရာဝဏ်-ရတနာအိမ်ရာစီမံကိန်းအတွက် Precast စက်ရုံဆောက်ရန် တစ်ဓကလျှင် ကျပ် ၂၂၅ သန်းဖြင့် မြေ ဧက ၅၃ ဒသမ ၀၇၃ ဧကကို ကုမ္ပဏီလေးခုသို့ သုံးလအတွင်း သုံးကြိမ် အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချခဲ့။
Original Group က ၁၁ ဒသမ ၈၈၅ ဧက၊ Shwe Taung က ၁၂ ဧက၊ ဦးဝင်းအောင်၏ Dagon International က ၈ ဒသမ ၄၅၈ ဧကနှင့် Nငေညါ Gမသကစ က ၂၀ ဒသမ ၇၃၀ ဧက ဝယ်ယူခဲ့။
Dagon International က ကျပ် ၈၀၃ ဒသမ ၀၅၀ သန်းနှင့် Naing Group က ကျပ် ၂၈၆၄ ဒသမ ၂၅၀ သန်း အကြွေးကျန်။ စုစုပေါင်းကျပ် ၃၆၆၇ ဒသမ ၃ သန်းကျန်ရှိ။
(ပေးသွင်းရန် (အကြွေးများ) ကျန်ရှိနေသဖြင့် စာချုပ်ပါ စည်းကမ်းအတိုင်း ကောက်ခံရာတွင် ကြီးကြပ်မှုအားနည်းနေကြောင်း စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြ)။
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲ (၃) ကြွေးကျန်
ကုမ္ပဏီ ခြောက်ခုအနက် သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်က ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုနှင့် ၎င်းမတိုင်မီအစိုးရလက်ထက်က ကုမ္ပဏီလေးခုပါဝင်သည်။
၃၁.၃.၂၀၁၇ အထိ အဆိုပါခြောက်ဦး၏ ကြွေးကျန် အရင်း၊ အတိုး စုစုပေါင်း ၅၅ç၁၁၄ ဒသမ ၄၅၂ သန်းရှိသည်။
(လုပ်ငန်းရှင်အချို့ကို တရားစွဲဆိုဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း စာရင်း စစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာ ဖော်ပြ)။
မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်ခွဲ (၄) ကြွေးကျန်
ဘဏ်ချေးငွေအတွက် အာမခံပစ္စည်းများယူထားပြီး ကြွေးကျန် ၁၇ ဦး၊ (၂၃.၁.၂၀၁၈) အထိ စုစုပေါင်းကြွေးကျန် ၁၆၅ ဒသမ ၀၁၈ ဘီလီယံရှိ။
ကြွေးကျန်ရှိသည့် လုပ်ငန်းရှင် ၁၇ ဦးအနက် အများစုမှာ ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီများဖြစ်ပြီး ဆိုင်းငံကာလများဖြင့် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရန် ညှိနှိုင်းထားသည်။
လုပ်ငန်းရှင် ၁၇ ဦးလုံးကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်နှင့် ၎င်းမတိုင်မီ အစိုးရလက်ထက်က ချေးငွေထုတ်ချေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကန်တော်ကြီးသဘာဝဥယျာဉ်အတွင်းရှိ ကရဝိတ်ဥယျာဉ်ကမ္ဘာကို (၁.၉.၂၀၁၀) မှ (၃၁.၈.၂၀၄၀) အထိ နှစ် ၃၀ ငှားရမ်းထား။
တစ်လအတွက် တစ်စတုရန်းပေ ၄၇ ဒသမ ၄၇၇ သာကျသင့်။
ကန်တော်ကြီးပတ်ဝန်းကျင်ပေါက်ဈေး တစ်လအတွက် တစ် စတုရန်းပေလျှင် ၂၀၀၀ ကျပ်ရှိ။
နိုင်ငံတော်က တစ်နှစ်လျှင် ကျပ် ၁၉ ဒသမ ၅၀၄ ဘီလီယံနစ်နာဟု စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြ။
ရှုခင်းသာအပန်းဖြေဥယျာဉ်ရှိ မြေ ၁၈ ဒသမ ၆၃ ဧက ကို (၁.၁၁၂၀၁၃) မှ (၃၁.၁၀.၂၀၅၈)အထိ ၄၅ နှစ် အငှားချ။
တစ်စတုရန်းပေလျှင် ၅၉ ဒသမ ၆၆ ကျပ်သာကျသင့်။
ပြင်ပပေါက်ဈေး တစ်စတုန်းရန်းပေလျှင် ၃၇၅ ကျပ်ရှိ။
တစ်နှစ်လျှင် နိုင်ငံတော် ၃ ဒသမ ၅၈၄ ဘီလီယံနစ်နာကြောင်း စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြ။
မြကျွန်းသာအပန်းဖြေဥယျာဉ်ရှိ မြေ ၄၂ ဒသမ ၂၄၀ ဧကကို ကုမ္ပဏီရှစ်ခုသို့ ငှားရမ်းထား။
Max Myanmar နှင့် ဧဒင်ကဲ့သို့ ကုမ္ပဏီကြီးများပါဝင်။
တစ်စတုရန်းပေလျှင် ၂၅ ကျပ်နှုန်းဝန်းကျင်ဖြင့် (၁.၄.၂၀၁၃) မှ (၃၁.၃.၂၀၇၃) အထိ နှစ် ၆၀ ငှားရမ်းထားခြင်းကြောင့် YCDC က (၉.၂.၂၀၁၇) အမိန့်ဖြင့် လုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်းရန်နှင့် ငှားရမ်းခ ကောက်ခံမှုကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်းခဲ့။
ကုမ္ပဏီခြောက်ခုသာ လုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်းထားပြီး နေလပွင့် ကုမ္ပဏီက ဖူမာန်လုံနှင့် ခိုင်လီစားသောက်ဆိုင်၊ Ryuji ကုမ္ပဏီက Sabaie နှင့် Lotus စားသောက်ဆိုင် ဖွင့်လှစ်ရောင်းချလျက်ရှိဟု စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြ။
ပြည်သူ့ဥယျာဉ်မြေ ၇၆ ဒသမ ၃၆ ဧကကို (၁.၄.၂၀၁၁) မှ ၂၅ နှစ် ငှားရမ်းထား။
ငှားရမ်းသည့် ၇၆ ဒသမ ၃၆ ဧကအနက် ၄၈ ဒသမ ၉၄ ဧကမှာ ပြည်သူပိုင်ဧရိယာဖြစ်၍ ကျန်ရှိသည့် ဝင်ငွေရလမ်း လုပ်ကိုင်နိုင်သည့်မြေ ၂၇ ဒသမ ၃၉ ဧကဖြင့် တွက်ချက်ပါက ငှားရမ်းခမှာ တစ်စတုရန်းပေလျှင် ၁၇ ဒသမ ၄၆ ကျပ်သာရရှိ။
နိုင်ငံတော်က တစ်နှစ်လျှင် ကျပ် ၁၄ ဒသမ ၀၆၇ ဘီလီယံနစ်နာဟု စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြ။
ကန်တော်ကြီးသဘာဝဥယျာဉ်အတွင်း မြေ ၁၈၃,၇၁၇ စတုရန်းပေကို (၂၀၁၅-၂၀၁၆) ဘဏ္ဍာနှစ်မှ (၂၀၁၇-၂၀၁၈) ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ သုံးနှစ် ကျောက်တံတားမြို့ မိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းထံ ငှားထားပြီး အဆိုပါအသင်းက စားသောက်ဆိုင်ငါးဆိုင်ထံ တစ်ဆင့် ပြန်ငှား။
အစိုးရထံပေးသွင်းသည့် ငှားရမ်းခ တစ်လအတွက် တစ်စတုရန်းပေ လျှင် ၅၆ ဒသမ ၉၁ ကျပ်။
ပြင်ပပေါက်ဈေး ငှားရမ်းခ တစ်လအတွက် တစ်စတုရန်းပေလျှင် ၁၀၀၀ ကျပ်။
နိုင်ငံတော်က တစ်နှစ်လျှင် ကျပ် ၂ ဒသမ ၀၇၉ ဘီလီယံနစ်နာ၊
(ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘဲ အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အား အခွင့်အရေး တစ်ရပ်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည့်အပြင် စာချုပ်စည်းကမ်းနှင့် ညီညွတ်မှု မရှိခြင်း၊ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ကြော်ငြာခေါ်ယူ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ငှားရမ်သင့်ဟု စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြ)။
(၁) မရမ်းကုန်းဗီလာ အဆင့်မြင့်အိမ်ရာစီမံကိန်း၊ (၂) ပါရမီအိမ်ရာ စီမံကိန်း၊ (၃) နိုင်ငံဝန်ထမ်းအငှားအိမ်ရာ၊ အရောင်းအိမ်ရာနှင့် Mixed Use စီမံကိန်း၊ (၄) ငွေပင်လင် Dry Post စီမံကိန်း၊ (၅) ပြည်သူ့ဘဝမြှင့်တင်ရေးအိမ်ရာ (တွံတေး) (Progect X) နှင့် ဒဂုံအရှေ့ခေတ်မီစက်မှုဇုန်နှင့် စက်မှုဇုန်အထောက်အကူပြုအိမ်ရာစီမံကိန်း (မြောက်ပိုင်း) တို့အတွက် YMD ကုမ္ပဏီက ကျပ် ၅၄ ဘီလီယံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထား။
NYDC (New Yangon Development Company)
NYDC သည် ရာနှုန်းပြည့် အစိုးရပိုင်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီဖြစ်။
မတည်ရင်းနှီးငွေကျပ် ၁၀ ဘီလီယံ။
ကြည့်မြင်တိုင်တစ်ဖက်ကမ်းတွင် ရန်ကုန်မြို့တော်သစ်စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရန်။
ဦးသိမ်းဝေ(ခ) Serge Pun ဒုဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒါရိုက်တာ
ဦးဟံထွန်း (ဝန်ကြီး) ဒါရိုက်တာ
Mr.George Yeo ဒါရိုက်တာ
စာရင်းစစ်ချုပ် အစီရင်ခံစာက ဖော်ညွှန်းသော နိုင်ငံဘဏ္ဍာနစ်နာမှုများ
ကိုးကား – ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာမှ ထုတ်နုတ်ဖော်ပြသည်။
နိုင်ငံဘဏ္ဍာနစ်နာငွေ စုစုပေါင်း ကျပ် ၈၃ ဒသမ ၀၆၅ ဘီလီယံ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် (၃) နှင့် (၄) တို့၏ ချေးငွေလက်ကျန်များကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားခြင်းမရှိချေ။ လုပ်ငန်းရှင်များက အဆိုပါချေးငွေများအတွက် အာမခံပစ္စည်းများပေးအပ်ထားပြီး ဘဏ် (၄) ကြွေးကျန်များသည် နိုင်ငံတော်နှင့် ညှိနှိုင်းလျက်ရှိသောကြောင့် ဆုံးရှုံးသွားသော ငွေများမဟုတ်ပါ။
Tags: The Voiceရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စာရင်းစစ်ချုပ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် စာရင်းစစ်ချုပ်အစီရင်ခံစာ
ကလေးငယ်များ၏ ဖုန်းစွဲလမ်းမှု – ဘေးနှင့် ဆေး
Next story အစပျောက်သွားသော ဆော်ဒီဂျာနယ်လစ်နှင့် အစဖျောက်ထားသော အိမ်ရှေ့မင်းသား MBS
Previous story “ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဒီတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း မရှိဘူးဆိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး”